Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 5:1-13
Aguamammɔ bi a na ɛrekɔ so (1-5)
Mmɔkaw kakraa bi na ɛma mmɔre no nyinaa kaw (vMunyi ɔbɔnefo no mfi mo mu (9-13)
5 Yɛate sɛ aguamammɔ*+ bi rekɔ so wɔ mo mu, aguamammɔ* a enni amanaman mufo mpo mu. Ɛne sɛ, obi agye ne papa yere.+ 2 Eyi yɛ asɛm a ɛsɛ sɛ mode hoahoa mo ho? Ɛnyɛ mo werɛ na ɛsɛ sɛ ɛhow mmom+ na muyi ɔbarima a ɔyɛɛ saa ade no fi mo mu?+ 3 Ɛwom sɛ minni hɔ wɔ honam mu de, nanso mewɔ hɔ wɔ honhom mu, na mabu ɔbarima a ɔyɛɛ saa ade yi atɛn dedaw te sɛ nea mewɔ hɔ ankasa. 4 Sɛ muhyiam yɛn Awurade Yesu din mu, bere a munim sɛ me ne mo wɔ hɔ wɔ honhom mu, a yɛn Awurade Yesu tumi nso ka mo ho a, 5 ɛsɛ sɛ mode saa ɔbarima no hyɛ Satan nsa+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhonam no bɛsɛe, na wɔagye honhom no nkwa, Awurade da+ no. 6 Mo ahohoahoa no nyɛ fɛ. Munnim sɛ mmɔkaw* kakraa bi na ɛma mmɔre no nyinaa kaw+ anaa? 7 Munyi mmɔkaw dedaw no ngu, na ama moayɛ mmɔre foforo, sɛnea mmɔkaw biara nni mo mu no. Efisɛ wɔanya de yɛn Twam guammaa+ Kristo no abɔ afɔre.+ 8 Enti mommma yɛmmfa mmɔkaw dedaw, anaa bɔneyɛ ne amumɔyɛ mmɔkaw nnni afahyɛ* no,+ na mmom momma yɛmfa kronkronyɛ ne nokware paanoo a mmɔkaw nnim nni. 9 Krataa a mekyerɛw brɛɛ mo no, meka kyerɛɛ mo wom sɛ mo ne aguamammɔfo* mmmɔ.* 10 Ɛnyɛ nea mereka ne sɛ montwe mo ho koraa mfi aguamammɔfo* a wɔwɔ wiase yi mu+ anaa adifudepɛfo anaa apoobɔfo anaa abosonsomfo ho. Ɛnde anka gye sɛ mufi wiase koraa.+ 11 Na seesei merekyerɛw mo sɛ, obiara a wɔfrɛ no onua a ɔyɛ oguamammɔfo* anaa odifudepɛfo+ anaa ɔbosonsonni anaa obi a otwa nkurɔfo adapaa* anaa ɔsabofo+ anaa opoobɔfo+ no, mo ne no mmmɔ;*+ saa onipa no, mo ne no nnnidi mpo. 12 Wɔn a wɔwɔ akyi* no de, sɛ wobebu wɔn atɛn oo, sɛ wɔremmu wɔn atɛn oo, ɛfa me ho bɛn? Ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ mo mu no na mubu wɔn atɛn, 13 na Onyankopɔn nso abu wɔn a wɔwɔ akyi* no atɛn?+ “Munyi ɔbɔnefo no mfi mo mu.”+
^ Kyerɛ sɛ, Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ no. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “munnyae sɛ mo ne aguamammɔfo bɔ fekuw no.”
^ Anaa “ɔsopa afoforo.”
^ Anaa “munnyae sɛ mo ne no bɔ fekuw.”
^ Kyerɛ sɛ, wɔn a wonni asafo no mu.